Catalog: Vanonatsa Mhepo vane Disinfection Basa
Mumazuva ano akaipa emhepo nharaunda uye yakakomba Covid-19 (coronavirus) kutapurirana, tinoda chaiyo disinfection yerudzi rwekuchenesa mweya kunatsiridza nzvimbo yedu yekurarama, kwete chete kubvisa guruva, PM2.5, utsi, VOCs asiwo hutachiona nemavhairasi. Airwoods mhepo yekuchenesa iri disinfection yerudzi rwekuchenesa mweya. Iyo inokupa iwe yekupedzisira mhinduro yekuchenesa mweya. Medical-grade disinfection tekinoroji inobudirira inouraya hutachiona, mabhakitiriya uye kutsemuka VOCs, Benzene, Formaldehyde, nezvimwewo. Kana mweya uchinge waenda munzvimbo inouraya utachiona panogadzirwa ioni dzine simba, utachiona hunourayiwa sezvo maDNA avo ari kuparadzwa; organic magasi akatsemuka sezvo avo mamorekuru zvisungo zvakaputswa. Iyo sterilizer yemhepo yakakura yekufema dhizaini inobvumira kushandiswa munzvimbo hombe senge imba yekutandarira, hofisi, zvitoro, kiriniki, raibhurari.
Inogona kunyatso kuodza nicotine (inogadzirwa nemidzanga) uye inoshatisa hunhu hwehutsi hunosvibisa.
Kutsemura zvinhu zvinokuvadza zvakaita benzene uye benzene nhevedzano, magasi anokuvadza anofarira formaldehyde uye aldehyde ketone inogadzirwa kubva kushongedzo yeimba pasina kusvibiswa kwechipiri.
Kana mweya wakasviba ukapinda musimboti wechinhu chinonatsa, iyo yakasimba simba ions inogadzirwa neiyo yakasimba simba mapuru mune yepakati chikamu chinokanganisa mamorekuru zvisungo zvezvinosvibisa, zvichikonzera CC uye CH zvisungo izvo zvinoumba mamorekuru zvisungo zveanonyanya kukuvadza tusingaoneki. uye magasi anotsemuka, saka utachiona hunokuvadza hunourawa sezvo DNA yavo ichiparadzwa uye magasi anokuvadza akadai se formaldehyde (HCHO) neBenzene (C6H6) akatsemurwa kuita CO2 neH2O.
Dynamic disinfection uye kunatswa kunounza kuenderera kwakakwira kuita pakuuraya mabhakitiriya nemavirusi, kutsemura magasi anokuvadza uye kuora hutsi hutete.
Hapana yakasara yechipiri kusvibiswa inogadzira kunetseka kushoma uye kuchengetedzwa kuri nani.
Kuramba kushoma, kushomeka kwepasi, kuraswa kwakaderera, kushandiswa kwesimba kwesimba.